आखिर किन रातारात भाइरल भयो दाङको यो बाङ्गे सडक : यस्तो छ खास कारण – Enepali Samchar
आखिर किन रातारात भाइरल भयो दाङको यो बाङ्गे सडक : यस्तो छ खास कारण
March 8, 2021 March 8, 2021 adminLeaveaComment on आखिर किन रातारात भाइरल भयो दाङको यो बाङ्गे सडक : यस्तो छ खास कारण
e nepaalisamchaaar /दाङ : पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरू भाइरल (रातारात चर्चा) भएको पाइन्छ। दाङको एउटा सडक पनि टिकटकमा हिजोआज भाइरल हो। जुन सडक अवलोकन गर्न दैनिक सयौँ संख्यामा मानिसहरू आउने गरेका छन्।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१० नारायणपुरदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्न सडक करिब एक सातायता सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै भाइरल भइरहेको हो। घोराही-१०, नारायणपुरदेखि वडा नं. ११ हुँदै १२ को सिमलकुटीसम्म करिब ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। उक्त सडक अन्तर्गत घोराही-११, झुम्केटाडी निकै भाइरल भइरहेको छ। त्यहाँ भिडियो बनाउनको लागि जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट टिकटक प्रयोगकर्ताहरू पुग्ने गरेका छन्।
सामाजिक सञ्‍जाल टिकटकमा भिडियोदेखि पछि आफू पनि हेर्न आएको तुलसीपुरकी कल्पना डाँगीले बताइन्। ‘टिकटकमा निकै भाइरल भएको थियो, कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको हौँ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य दिनभन्दा विदाको दिन निकै भीडभाड हुँदोरहेछ, यहाँ अरू कुनै हेर्ने चिज त छैन, सबै सडकमा फोटो खिच्नेदेखि भिडियो बनाउन आउने रहेछन्। तर, उक्त क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम बढी छ। धेरै भीडभाड र सवारी साधनको चाप पनि बढी हुँदो रहेछ
त्यस्तै, शान्तिनगर-२, अमुवाबाट भाइरल सडक हेर्न आएका गणेश खत्रीले पनि सामाजिक सञ्जालबाट आफूले थाहा पाएको बताए। उनले विदाको दिन भएकाले कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको समेत बताए। ‘सडक त धेरै बनेका छन्। तर, यो सडक भाइरल भएको देख्दा के रहेछ भनेर आएका छौँ,’ उनले थपे, ‘आज शनिबारको दिन यहाँको दृश्य हेर्दा म आफै दंग परे। यति धेरै मानिसहरू सडक हेर्न आउँदा रहेछन्। यो सडक सर्पजस्तै घुमेकाले पनि भाइरल भएको होला।’
त्यस्तै, साथीहरूले भनेपछि यो भाइरल सडक हेर्न तुलसीपुरबाट आएको अर्का सुनील सुनारले बताए। उनले भने, ‘खासै त केही रहेनछ, सडक घुमाउरो रहेछ। मानिसहरूको भीडभाड एकदमै हुँदो रहेछ। हेर्दा रमाइलो लाग्दो रहेछ।’ उक्त ठाउँमा युवा/युवतीहरूको चहलपहलले गर्दा स्थानीय पनि अचम्म परेका छन्। स्थानीय डिल्ली बहादुर वलीका अनुसार करिब एक हप्तादेखि उक्त ठाउँमा धेरै चहल पहल बढ्दै गइरहेको छ। उनले सडक कालो पत्रे भएको र सर्प घुमेको जस्तै भएकाले टिकटक बनाउनेहरू गर्दा भाइरल भएको बताए।
यो सडक निर्माण सम्पन्न भएको करिब ३ महिना जति भएको उनले बताए। उक्त सडकमा टिकटक भिडियो बनाउने फोटोहरू खिच्नेहरू मात्र खुशी भएका छैन्। त्यो चहल पहल देख्दा स्थानीयहरू पनि खुशी भएका छन्।
नेपालमै बन्दैछ दुनियाँ चकित हुने १६ अर्बको स्पोर्ट पार्क ! क्रिकेट फुटबल सहित २६ खेल एकै साथ खेल्न मिल्ने
चीनमा अवसर खोज्दै नेपाली व्यापारी